Man City Oo Doonaysa Saxiixa Neymar & Qorshaha Ay Ku Keenayso Etihad Oo La Ogaaday – Wararka Ciyaaraha Maanta
Man City Oo Doonaysa Saxiixa Neymar & Qorshaha Ay Ku Keenayso Etihad Oo La Ogaaday
Kooxda Man City ayaa lagu soo waramayaa in ay doonayso saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara kooxda PSG ee Neymar iyaga oo waliba dagsaday qorshe ay PSG ugu qancinayaan in ay ka iibiyaan xiddiga reer Brazil marka la gaadho suuqa kala iibsiga xagaaga.
Wargayska Sports Mole ayaa sheegaya in ay kooxda Man City doonayso in ay PSG miiska u saarto lacag iyo waliba xiddiga weerarka uga ciyaara ee Gabriel Jesus si ay u helaan adeega Neymar xilli ciyaareedka dambe.
Xiddiga 22 jirka ah ee Jesus ayaa ku dhibaatoonaya in uu la qabsado premier League isaga oo ka dambeeya xiddiga Sergio Aguero weerarka kooxda Man City ee xilli ciyaareedkan isaga oo aan joogto ugu ciyaarin kooxda.
Pep Guardiola ayaa doonaya in uu dhiso koox xilli ciyaareedka dambe ku guulaysata tartanka champions League kadib markii ay 8 dhamaadka tartanka kaga hadheen xilli ciyaareedkan kadib markii ay kaga hadheen lugta kooxda Tottenham.
Neymar ayaa si weyn loola xiriirinayaa dhankiisa ka tagista kooxda PSG isaga oo la qabsa la,a nolosha France iyada oo si weyn loola xiriirinayo kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kuwaas oo doonaya adeegiisa.
Laakiin City ayaa qorshahan doonaysa in ay kaga hor qaado saxiixa xiddiga kooxaha reer Spain waliba keento premier League si uu uga caawiyo in ay xilli ciyaareedka dambe ku tartanto champions League.
Neymar ayaa dhaliyay 48 gool 53 kulan oo uu u ciyaaray kooxda caasimada France ee PSG tan ilaa markii uu 222 milyan oo euro ugu soo biiray kooxda xagaagii 2017 markaas oo uu noqday xiddiga ugu qaalisan suuqa kala iibsiga.